Iflethi okanye indlu ekwicomplex ezimeleyo eMt. Charleston - I-Airbnb
Iflethi okanye indlu ekwicomplex ezimeleyo eMt. Charleston
Igumbi lakho lokulala e indlu sinombuki zindwendwe onguDon
Hlala kwiintaba ezicocekileyo nje imizuzu engama-45 ukusuka kwi-LV Strip. Ifakwe entliziyweni yehlathi lesizwe laseHumboldt-Toyabe, elinemozulu encinci ye-20 degrees epholileyo kuneLas Vegas. Eli khaya limangalisayo lisanda kulungiswa yimbali ineesuti ezinkulu ezi-2 kunye namagumbi amabini okulala amakhulu, kwaye ingalala kangange-10.
I-Health Brain Resort iqhutywa yi-NV non-profit Brain Health Warriors.
* Akukho mbuzo malunga nokuhlala ixesha elifutshane nceda *
Igumbi lakho labucala / ISuite entliziyweni yehlathi lesizwe laseHumboldt-Toiyabe, elona hlathi likhulu likazwelonke kumazantsi angama-48, eli khaya limangalisayo lisanda kulungiswa likhaya elineesuti ezinkulu ezi-2, kunye namagumbi amabini amakhulu anebhafu ekwabelwanayo ngayo, kwaye inokulala kangangoko. 16.
Ifumaneka kwimizuzu nje engama-45 ukusuka kumbindi wedolophu yaseLas Vegas, le ndawo yokuhlala ikhethekileyo inokuba liziko lakho kuwo omabini amashishini, ulonwabo okanye ube yinxalenye yenkqubo yethu yeMpilo, ukuhlala ixesha elide kumazantsi eNevada/kwingingqi yaseLas Vegas.
Ukude neendawo zokuhamba intaba kunye nebhayisekile, kunye nemizuzu kude neyona ndawo inkulu yokudlala ikhephu / ikhephu eMazantsi eNevada, eli khaya lihle linekhitshi / igumbi lokutyela elikhulu kakhulu nelinyulwe ngokupheleleyo, ithala leencwadi, igumbi lokuhlala, kunye nezinye iindawo ezininzi ekwabelwana ngazo. Ikhaya lokuqala elakhiwe kwindawo encinci ye-Rainbow-subdivision, indawo ineembono ezilungileyo zentlambo ejikelezileyo kunye neentaba ezingqongileyo. Igumbi ngalinye/i-suite inaye kwaye ithiywe ngencopho yentaba ebonwa kwiifestile zabo.
Oku kukuhlala kwakho ngoxolo ixesha elide kulo mmandla, kude nesiphithiphithi saseLas Vegas.
Lo ngumnikelo owodwa kakhulu kuluntu. Ukwakhiwa kwakhona kweminyaka eyi-7 kunye nokulungiswa kwakhona kwagqitywa ngoDisemba 2018 ngumnini uDkt Don, umlutha kunye neengcali zempilo yengqondo umnini-ndawonye we-Las Vegas Neurofeedback Centre, i-Healthy Brain Resort. Uyilwe ngobuchule kwaye walihlaziya eli khaya kwaye ngoku unikezela ngezi zithuba zikhethekileyo ukuxhasa i-501 (3) (c) engenzi ngeniso ye-Health Brain Warriors. Ngokusingathwa kwayo, i-Healthy Brain Warriors iyakwazi ukubonelela ngokuvuselelwa kwempilo yengqondo kumagorha awonzakeleyo.
IAlpine suite enamagumbi amabini okulala, igumbi lokuhlambela labucala, indawo yokuhlala.
I-Mummy Peak eneebhedi ezi-2 zikaQueen, igumbi lokuhlambela ekwabelwana ngalo.
Ibharakhi enebhedi ezi-4, igumbi lokuhlambela ekwabelwana ngalo.
Iindawo eziqhelekileyo zibandakanya Igumbi lokuhlala, igumbi leTV, Ikhitshi / indawo yokutyela, Igumbi lokuhlamba impahla, iPavilion, iyadi, indawo yokupaka.
Ihlathi leSizwe laseHumbold-Toiyabe lelona hlathi likhulu lesizwe kumazantsi angama-48 kwaye likhaya leentlobo ezininzi zezityalo nezilwanyana ezikhethekileyo kulo mmandla. Uninzi lweendlela zokuhamba iintloko kumgama wokuhamba.
UDkt Don kunye no-Ariane, ababuki zindwendwe bakho, bahlala bekwisiza kwi-Chief’s Lair, imigangatho emibini, i-Suite yokuhlambela emibini eneembono ezigqwesileyo kwindawo.